Dalka Turkiga oo deg deg uga soo jawaabtay baaqii Madaxweyne Farmaajo | Xaysimo
Home War Dalka Turkiga oo deg deg uga soo jawaabtay baaqii Madaxweyne Farmaajo
Dalka Turkiga oo deg deg uga soo jawaabtay baaqii Madaxweyne Farmaajo
Dowladda Turkiga aya noqotay dowladdii ugu horreysay ee ka soo jawaabta baaqii Madaxweynaha Soomaaliya, Mudane Maxamed Cabdullaahi Maxamed (Farmaajo) ee u gurmashada dadka ay sameeyeen fatahaadaha xoogan ee ka jira qeybo badan oo ka mid ah Soomaaliya.
Wasaaradda arrimaha dibadda ee dalka Turkiga ayaa qoraal ka soo baxay waxa ay uga hadashay saameynta ka dhalatay fatahaadaha wabiyada Shabelle iyo Jubba, kuwaas oo ay ku barakaceen dad badan oo Soomaaliyeed.
Warka ka soo baxay wasaaradda arrimaha dibadda ee dalkaasi ayaa lagu sheegay in ugu horreyn ay ka tacsiyeyneyso dhimashada ka dhalatay fahadahaasi, islamarkaana ay aad uga xun tahay dhibaatadaasi.
Sidoo kale waxa ay wasaaradddi sheegtay inay ka qeyb qaadaneyso gurmadka loo fidinayo dadka barakacayaasha ee ku dhibaateysan magaalooyinka ay ka mid tahay degmada Beleweyne ee xarunta gobolka Hiiraan.
Hadalka hadda ka soo baxay Turkiga ayaa waxa uu ku soo aadayaa, iyadoo xaaladdii ugu darneyd ee fatahaada ay ka taagan tahay deegaano ka tirsan HirShabelle.